Manchester City Oo Ka Hartay Doonitaankeedii van Persie Kuna Adkeysanaysa Inuusan Ka Tegeyn Dzeko - jornalizem
Manchester City Oo Ka Hartay Doonitaankeedii van Persie Kuna Adkeysanaysa Inuusan Ka Tegeyn Dzeko
Tababaraha kooxda haysata horyaalka Ingiriiska Robert Mancini ayaa sheegay inaysan suurtogal ahayn in uu ka tago kooxda City weeraryahankeeda Edin Dzeko.
Mancini ayaa sidoo kale sheegay in kooxdiisu haatan ka hartay doonitaankeeda Persie maadaama uu isagu diidan yahay in uu ku biiro kooxda Man City. Tababaraha Eastlands oo la hadlay Sky Sport Italia ayaa wax laga weydiiyey sida uu arko in kooxaha Juventus iyo AC Milan ay doonayaan weeraryahanka City ee Dzeko.
“Waan ku faraxsanahay sababatoo taas waxa ay la macno tahay in aan haysano ciyaaryahano wanaagsan, balse ma aha mid suurtogal ah inuu kooxda ka tago Dzeko,”ayuu yiri Mancini.
Tababare Mancini oo ka hadlay fikirkiisa ah warar maalmahan laga soo xiganayay Dzeko oo ahaa in uu ku daalay in uu kursiga keydka fadhiyo ayuu yiri: “Waa sax inuu yiraahdo waan ku daalay fadhiga kursiga keydka,balse marka aad ku soo biirtid koox weyn tartanku wuu furan yahay.”
Mancini oo ka hadlay arrinta ah van Persie oo ay doonayaan kooxaha Man United iyo Juventus ayaa sheegay inuusan fileyn in Persie uu ku biirayo kooxda Man City. Tababarihii hore ee kooxaha Inter,Lazio iyo Fiorentina oo wax laga weydiiyey fikirkiisa ku aadan wadanka uu ka soo jeedo ee Italy horyaalka dhowaan ka furmi doona ee Serie A ayaa yiri:
“Juventus waa koox aan la dhayalsan karin, ma aha oo kaliya inay ku guuleysatay Scudetto balse waxa ay kooxda samaysay xoojin badan. Dhinaca Premier League ayuu tilmaamay Mancini in kooxda Man United ay tahay mid meel halis ah fadhida.